Ebla 26, 2021
Prezidaantii Amerikaa Joo Baaydiin
Bara loola addunyaa isa 1ffaa ajjeechaan lammiwwan Armeeniyaa hedduu irratti Epmaayeerri Ottoman dhaqqabsisee duguuggaa sanyiiti jechuun prezidaantiin Amerikaa Joo Baaydiin sambata darbee dubbatanii jiru.
Prezidaant Baaydiin kana jechuun isaanii waadaa yeroo duula filannoo seenan kan itti kabajan yoo ta’u guyyichiis guyyaa fixiinsaa lammiwwan Armeeniyaa biyya isaanii keessaa fi biyya alaa keessa jiraatan itti yaadatanti ture.
Waggaa waggaan guyyaa kanatti lammiwwan Armeeniyaa kanneen duguuggaa sanyii bara sanaan dhuman yaadanna kan jedhan Baayddin fixiinsii akkasii lamuu akka hin dhufneef ittisuuf cicha keenya gaafata jechuun ibsa baasan.
Lammiiwwan Yunaaytid Isteetes duguuggaa sanyii waggaa 106 dura gaggeeffameen kanneen lubbuu ofii dhaban lammiwwan Armeeniyaa maraaf kabajaa qaban ibsu jedhan.
Sambata darbee Tarkiin Ambaasaaddara Amerikaa Biyya ishee keessa turan waamuu ishee ministriin dantaa alaa ishee beeksisee jira.Itti aanaa ministeera haajaa alaa Tarkii Ambaasaaddara Amerikaatti, jecha Baaydiin kun fudhatama kan hin qabnee fi kan balaaleeffatan ta’u itti himan jedha ministriin hajaa alaa Tarkii kun.
Waraanni Amerikaa Afgaanistaan Keessaa Ba’u Jalqaba
Looltonni Naayjeriyaa Hidhattotaan Haaleelaman
Waraanni Chaadiin Bulchaa Jiru Yeroon Ammaa Kan Marii Miti Jedha
Moqaadishoo Keessaa Dilbata Kaleessaa Dhukaasatu Ture
Hogganni Paartii Saalsaay Wayyaanee Gadhiifamanii Jiru